အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ခရုခွံထဲမှာ နေကြမလား
25 Responses to “ခရုခွံထဲမှာ နေကြမလား”
လှလိုက်တာ ချောရေ အဲဒီနေရာလေး သွားလည်ချင်လိုက်တာဗျာ။ အရမ်းအေးချမ်းနေမှာပဲနော်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းပါလား ချောရေ။ ကျေးဇူးနော်။ ဘုန်းဘုန်းလည်း ကျောင်းဆောက်ရင် လိပ်ခွံပုံသဏ္ဍာန်လေးဆောက်မယ်။ ဟိ။
အိမ်ဆိုရင် ပုစိစိ အိမ်လေးတွေမကြိုက်ဘူး..
ဒါနဲ့ ချောသွားချင်လားဟင် ?
ဟန်နီးမွန်းကျရင် သွားပေါ့ :P
ခရုစားတဲ့ ဂေါ်ဇီလာကြီး လာပြီးတော့ တကယ့်ခရုကြီးထင်ကြီး ကိုက်ချီစားသောက် ပစ်လိုက်ရင်တော့ ဒုက်ခ။ ကြွှပ် ကြွပ် ကြွပ်တောင် မြည်ဦးမယ်။း))
အပေါ်က ခရုခွန်အိမ်မှာ နေချင်လိုက်တာ......အမြဲလာဖတ်တယ်....ကျေးဇူး
ဒီခရုခွံ အိမ်လေးတွေကတော့ တကယ်ပဲ ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ မချောရေ..၊ ဘီဒိုတွေ၊ စားပွဲတွေ အများကြီး ဆန့်မယ့်ပုံ မပေါ်ပေမယ့် လူတိုင်းက အနည်းဆုံး တစ်ညလောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝင်အိပ်ချင်ကြမယ့် အိမ်ကလေးတွေ...၊ မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါဗျာ..။း)
ဒါမျိုးလေး တစ်အိမ်လောက်တော့ ချောင်းသာမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ငွေဆောင်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ဆောက်ချင်စမ်းပါဘိ :)
ကောင်းပါ့ ညီမချော ရေ
ဒီလို အိမ်လေးတွေ မှာတော့ နေချင်လှတယ် ပျားရည်စမ်း ခရီး ထွက်ရင် အဲဒီကိုဘဲသွားတော့မယ်
အိမ်လေးတွေက တပုံကို တမျိုးစီ ချစ်စရာကောင်းတယ်။ ပုံစံထုတ်ရတာ အလွန် ခေါင်းစားပြီ၊ လက်ဝင်မှ သေခြာသလို၊့့hand made မို့ လို့ပိုက်ဆံ အရမ်းကုန်မှာပဲ။
ထူးထူးဆန်းဆန်း ချစ်စရာခရုအိမ်လေးတွေ... ကြိုက်တယ်... နေတော့မနေချင်ပါဘူး (မဝယ်နိုင်လို့)
အတွင်းအပြင်အဆင်တွေကလည်း သေသပ်ပြီး လှပနေတယ်။ အိမ်လေးတွေကြည့်ပြီး စိတ်ကူးပဲ ယဉ်သွားနိုင်တော့တယ်..။
သဘောကျစရာလေးတွေပါလား.. မချောရေ..း)))
ထူးထူးဆန်းဆန်း .. အိမ်ထဲမှာ ပြင်ထားတဲ့အပြင်အဆင်တွေကလည်း ဆန်းသစ်တယ် .. မိုက်အိ ..
အစ်မချောရေ .. Comment ရေးလို့ရသွားပြန်ပြီနော်....
ဆန်းဆန်းပြားပြား ခရုအိမ်ထဲ ၀င်ကြည့်သွားတယ်။ နေချင်စဖွယ် ပြင်ထားတာတွေ့ရတယ်နော်... ဒါပေမယ့် ပထမအိမ်က အသက်ရှူကျပ်တယ်... ဒုတိယအိမ်ကတော့ ပိုနေလို့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ရှာရှာဖွေဖွေ ပြောပြပေးတဲ့ အစ်မချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ချစ်စရာလေး...။ ကစားစရာ အရုပ်အိမ်နဲ့သာ တူတော့တယ်။ ရှာရှာဖွေဖွေ ရွှေချောကို လက်ဖျားရော လက်ရင်းပါ ခါသွားတယ်....ဟိဟိ... :)
အားပါး... အိမ်လေးတွေ တကယ်လှတယ်ဗျာ...
ကိုရင်နဲ့သွားနေမလို့ ဟိဟိး)
တော်တော်စိတ်ကူးကောင်းတဲ့လူတွေပဲ။ ပိုက်ဆံလည်း တော်တော်သုံးရမယ့်ပုံနော်
နေချင်စရာလေးရယ်... ချောတို့ကတော့ ရှာ၂ဖွေ၂တင်တတ်ပါပေ....။
ဒီလထဲ အိမ်ပြင်ဖို့ရှိတာနဲံ့အတော်ပဲအစ်မး))
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ် အိုင်ဒီယာကောင်းလိုက်တာချောရေ။ ထူးဆန်းမှုလေးတွေ တင်နိုင်တာကိုလည်း ချီးကျူးတယ် မမြင်ဘူး မကြုံဘူးတာတွေ ချောဆီကနေ ဗဟုသုတွေ အများကြီးရခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
အိမ်လေးတွေကချစ်စရာလေးတွေ နော်အစ်မ... ဧည့်ခန်းထဲမှာ အပင်လေးတွေနဲ့ဟာကို ပိုကြိုက်တယ် :)
အိမ်လေးတွေက မိုက်တယ်ဗျာ။ နေချင်စရာလေးတွေ။ မိုဘာမှာကတည်းက ကြိုက်နေတာဗျ။ လာလည်သွားတယ် မချောရေ..။ :D
ခရုအိမ်လေးတွေ မိုက်တယ်။ ဂျူဂျူက အဲလိုအိမ်မျိုးနေချင်သတဲ့။ သူက အရမ်း သဘောကျနေတာ။ ဘီလျှံနာဖြစ်ရင်တော့ ဆောက်ပေးနိူင်ပါရဲ့။ ထီထိုးလိုက်ဦးမယ်။